Vaovao | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
10 fitsipika manan-danja amin'ny fitomboan'ny voatabia
Ireo mpamboly efa za-draharaha dia manana ny fomba fisakafoany manokana ho tomombina mitombo, izay samy hafa. Ary na betsaka toy inona aza ny mizara ireny fomba ireny, ny tsirairay dia hahazo zavatra vaovao avy amin'izy ireo ankoatra ny fandresena azony. Ireo torohevitra etsy ambany dia azo antoka fa ny fepetra vaovao ho an'ny vokatra tsara. Mandeha amin'ny lalana tsotra nefa marobe ihany koa, na dia mpilatsaka an-tsitrapo aza dia hahazo vokatra tsara.
10 fampiasa finday tsara indrindra ho an'ny mpamboly sy mpamboly
Ny fambolena zavamaniry zavamaniry sy voankazo ary zavamaniry dia lasa fialamboly mahafinaritra ho an'ny olona an-tapitrisany. Samy manao ezaka be ny mpamboly tsirairay, mba hahatonga ny vokatra ho tsara kokoa noho ny hafa. Ao anatin'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao avo lenta, maro ny fanolorana sy toro-hevitra mahasoa momba ny fitomboan'ny zavamaniry dia hita ao amin'ny Internet.
Torohevitra 10 ho an'ny zaridaina kamo, na ahoana ny fomba hanaovana trano hipetrahana?
Impiry matetika no mitranga rehefa tonga any amin'ilay trano fialan-tsasatra ianao mba hialana sasatra ary vokatr'izany, mandritra ny andro maromaro ianao dia manao raharaham-barotra sy mikorontana ao an-jaridaina? Olona maro no manana olana toy izany, na dia eto amin'ny firenena aza aho te-hiala sasatra sy mankafy ny fandriampahalemana. Avy eo, mandinika torohevitra izay afaka manampy amin'ny famolavolana sy fanovana ny trano fonenana ianareo mba hahafahan'ity sehatra ity ho noforonina ho an'ny fialam-boly.
10 zavamaniry malaza indrindra ho an'ny efitra fandraisam-bahiny
Ny habeny lehibe ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mahatonga azy ireo ho mora ny mametraka zavamaniry maro ao anatiny. Karazana solontenan'ny flora tsy hita ao amin'ny florist salon. Eto ianao dia mahita hazo palmie, ary dracaena ambony sy zavamaniry hafa izay tsy noeritreretin'ny tompony fa ilaina ny mametraka azy any amin'ny efitrano hafa.
Hevitra 12 ho an'ny fikarakarana zoro kanto ao amin'ny trano fonenanao
Moa ve ny toeram-ponenanao tsy manana toerana mendrika hialana sasatra, sa efa nanapa-kevitra ny hanome ny tranonkala efa misy efa ela ve ianao? Manolotra anao izahay hahafantatra hevitra mahaliana, noho ny antony mahatonga ny rehetra handany fotoana kely, vola ary ezaka. Ny vokatra dia ho lehibe - na dia ny zoron-trano tsy dia lavitra loatra, izay tsy noheverinao ho toy ny faritra ilaina, dia mety ho toerana mahafinaritra.
6 diso matetika ny fiheverana momba ny fialofana sy ny fanomanana raozy ho an'ny ririnina
Rehefa maniry raozy eny amin'ny tendrontany avaratra amin'ny fararano, dia ilaina ny manomana ireo voninkazo ireo amin'ny ririnina. Saingy tokony atao araka izay azo atao izany, manaraka ny tolo-kevitry ny matihanina matihanina. Maro anefa ny zaridaina manao ratsy. Voafitaky ny angano mahazatra momba ny fanomanana raozy mandritra ny vanim-potoana mangatsiaka ny olona.
Fomba fitsaboana dacha 5 na fandaozana ny fanahiana rehetra any am-bavahady?
Ho an'ny maro, ny andro fialan-tsasatra dia mahaliana sy mahasoa kokoa na dia ny fitsangatsanganana aza. Raha ny marina dia any amin'ny toeram-pitsangatsanganana ianao dia mipetraka any amin'ny toerana vahiny, ary any an-tranonao dia mahatsapa fifaliana kokoa. Ankoatr'izany, misy fomba izay ahafahanao manao (ary manao) avy eny amin'ny zarinao manokana sehatra famoronana sy fanasitranana.
8 diso ny mpamboly
Afaka mamolavola fanapahan-kevitra samihafa eo amin'ny zaridainanao manokana ianao. Ireo fanapahan-kevitra ireo dia mety ho mahay mamaky teny sy tsy tena mahay, ary na inona na inona traikefa, dia azo atao ny roa. Noho izany, mba hahitana ny tsy fahaiza-manaon'ny fandeferana azo zakaina, dia tena ilaina tokoa ho an'ny mpandidy sy ny mpamboly za-draharaha.
Ny hazo madinika indrindra ho an'ny zaridao
Ny fahatongavana avy any an-tanàna avy any an-drenivohitra rehefa vita ny herinandro dia mahasalama raha toa ka feno ny fofom-bovonan'ny voninkazo mamelana ny rivotra. Ny fofona malefaka dia hilalao ny anjara asan'ny aromatherapy, hanampy anao hiala sasatra, hanangana ny fanahinao, hanatsara ny fahasalamanao. Rehefa maniry ny voninkazo, dia mamoaka menaka tsy misy ilana azy ny ankamaroan'ny karazan-tsakafo.
Tsiambaratelo tsiambaratelo sy voankazo maromaro
Eo amin'ny latabatra fandroana, ny kôkômbinina voangona dia manana toerana mendrika. Maro amin'ireo vehivavy mpikarakara tokantrano no mahafantatra fa mora ny manomana legioma amin'ny fahavaratra, saingy ho an'ny maro dia tsy mahomby izany hevitra izany. Noho izany dia ilaina ny mahafantatra ny tsiambaratelo mahomby. Fitsipika momba ny fifantenana ny legioma Miankina amin'ny karazana vary. Ny fankafizana, ny Nezhinsky, ny mpifaninana, Murom, Nosovsky, Era, Ety, Cascade, Voronezhsky, Altai, Beregovoi, Avangard, Vyaznikovsky 37 dia mahazatra amin'ny sira.
Inona no pergola ary nahoana no ilaina ao amin'ilay tranonkala?
Pergola - trano fanorenana manokana. Ny teny dia nalaina tamin'ny fiteny italiana, izay midika hoe "extension" na "canopy". Azo atao toy ny fanorenana manokana na fanitarana ny trano lehibe (ohatra, trano na efitrano fatoriana). Pergola - zavatra eo anelanelan'ny fanohanana an-tsokosoko ho an'ny klioba sy ny arofanina saha.
Ny famolavolana sehatra momba ny olana: ny havoana
Ho an'ny ampahany betsaka, ireo tompon'ny dacha maoderina dia nahazo ireo tany ireo nandritra ny fizarana na dia nandritra ny Firaisana Sovietika aza. Tamin'ny vanim-potoana fahiny, ny olona dia tsy nizara tsara ireo tany tsara indrindra, fa ny ankamaroany dia nanolotra safidy izay tsy natao ho an'ny fambolena sy fiompiana hafa. Avy eto, maro ireo tranokala no toa tsy mitovy endrika ary manana halavoana maro sy avo.
Ny fototry ny fananganana dacha
Any amin'ny faritra ambanivohitra mba hihaona amin'ny zavatra rehetra andrasan'ny tompony, dia mitaky ny famolavolana mahay azy. Ity dia toerana izay tiantsika hialana amin'ny tanàna mihorakoraka, ary miasa ao an-jaridaina sy eo am-pandriana zaridaina. Ahoana no ahafahanao manamboatra ny taninao, mba hahalalan'ny rehetra ny zava-drehetra, mahasoa sy mahasoa? Siansa fotsiny izany.
Alitara Slide Alternative ao amin'ny saha
Maro ny zaridaina sy tompon-tranon'ny tranon'ny firenena no te hanana alpine mahavariana eo amin'ny teti-dratsiny. Mampalahelo fa ity nofinofy mahafinaritra ity dia iray amin'ireo lafo indrindra amin'ny famonoana, noho izany dia matetika tsy vita izany. Saingy ireo tia ny sari-tany amin'ny vato voajanahary dia tsy tokony hilavo lefona ary hanary ny faniriana hanoritra ny teti-teninao - ankoatra ny fitohizan'ny alpine malaza dia misy zaridaina maro hafa, tsy dia mampientanentana loatra, fa manatsara kokoa ny mamorona.
Kôkômbika mahazatra "miaraka amin'ny toetra" na maniry Momordica
Ankehitriny dia mijery zavamaniry tena faran'izay tsara isika. Manana toetra mahasoa maro izy io, tsiro mahazatra, ary antsoina hoe "tsiro mangidy tsine". Ny ankamaroany dia fantatra amin'ny anarana mistery "Momordika". Raha ny tena izy mikasika ny zavamaniry Momordica, raha ny tena marina, dia ny anarana amin'ny ankamaroan'ny zavamaniry - voaloboka isan-taona sy maharitra.
Fikarakarana ao amin'ny firenena: soup Dovga
Sangisangy mangatsiaka dia ampahany tena mahaliana amin'ny fomba nentim-paharazana. Any Rosia, maro no mahafantatra mahandro okroshka sy beetroot, fantatra any amin'ny kiobà Bolgara momba ny kefir. Ny tsindrin-tsakafo ho an'i Dovgi dia siram-kefir fotsiny, fa tsy ny zava-misy fotsiny no mahaliana azy, fa ny fahafahana hikarakarana amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona ihany koa. Na izany na tsy izany, dia azo atao foana ny mofomamy.
Manomana ny fandriana amin'ny taona manaraka isika: inona ary aiza no hambolena?
Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ireo mpamboly ao amin'ny fahalavoana dia ny filàna ny drafitra izay hitranga amin'ny herintaona sy ny toerana hivoatra. Avy amin'ny fandriana natao ho an'ny cucumbers, ary izay - ho an'ny kara, dia hiankina, ohatra, ny fampiroboroboana ny vokatra na ny ririnina amin'ny tongolo lay sy ny tongolobe. Andeha hojerentsika ny fomba fiheverana tsara ny fihodinan'ny tany eo amin'ilay tetika.
Hazo Mirairay: Azonao atao ve ny mampitombo azy amin'ny trano fatoriana amin'ny lohataona?
Ny grenady dia karazam-borona any atsimo izay mitombo any amin'ny tany mafana ary mipoitra amin'ny fararano. Heverina ho mariky ny fahavokarana, izay tsy mahagaga: misy voany bitika an-jatony eo ambanin'ny hoditry ny voankazo. Na dia eo aza ny grenady dia orinasa mpamokatra hafanana, maro ireo maniry ny hanandrana ny tanany ary hampiroborobo io voankazo mahagaga ao Rosia io.
Hevitra ho an'ny orinasanao manokana: ny famokarana legioma sy voankazo mangatsiaka
Ny angano fa tsy misy vitaminina sy zavatra hafa ilaina amin'ny voankazo sy legioma mangatsiaka dia nipoaka efa ho 30 taona lasa izay. Izany dia manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny raharaham-barotra amin'ity lalana ity. Nandritra ny taompolo 90, dia nitarika orinasa vahiny ny fitarihana amin'ny famokarana vokatra toy izany any amin'ny faritanin'ny Federasiona Rosiana. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nitombo be ny mpamokatra ao an-toerana, ny ampahany amin'ny entana amin'ny endriky ny fanomezana maimaim-poana any amin'ny tsena Rosiana.
Ahoana no manampy loko mamirapiratra ao amin'ny zaridao?
Raha mieritreritra ianao fa tsy ampy ny loko ao an-jaridaina, dia andramo ny manova ny endriny amin'izao fotoana izao, fa tsy manilika azy io amin'ny herintaona. Mampiseho ny mason-tsivana kely ianao, hamorona zavakanto ao amin'ilay tranokala, hamboly zavamaniry mamiratra ao amin'ny sehatra samihafa. Ireo zavamaniry mareva-doko toy izany dia tsy mamelona ny rivotra ao amin'ilay toerana, fa mameno izany koa amin'ny firindrana sy ny fampiononana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Vaovao